Samy nahalatsa-dra daholo ny tolona nandalo rehetra ary an-kavitsiana tamin’izy ireny no tonga tamin’ny tanjony fa saika niafara tamina marimaritra iraisana nosalovanina mpanelanelana iraisampirenena avokoa. Iza moa no tsy gina rehefa nahazo seza ? Na mpamakafaka politika sy mpanentana fandaharana politika nalaza nasiaka na mpanao politika nafana fo tamin’ireny fitarihan-tolona efa nisy ireny. Na tsy hiverenana intsony aza ny zava-nisy tany aloha dia hiaraha-mahita ny zava-misy ankehitriny raha natsangana ny governemanta Ntsay. Efa zary talentan’ny Malagasy mihitsy ankehitriny ity politikan’ny fizaran-tseza ity.